(Europe) 10 Jan 2018. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa dib u furmay isagoona socon doona bishan oo idil, Waxaan si joogta ah idin kugu soo gudbin doonaa ciyaartoyda la doonayo iyo kuwa lala saxiixday intaba insha’alaah.
Haddaba Aqriso wararka xanta ay saakay oo Arboco ah wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga:
Manchester City ayaa u soo bandhigtay Arsenal 20 milyan ay kaga dooneyso weeraryahankeeda Alexis Sanchez 29-jir, waxaana la fahansan yahay in xiddiga reer Chile uu la gaaray heshiis shaqsi ahaaneed uu usbuuciiba ku qaadanayo 250,00 oo bound. (Guardian)
Macallinka Arsenal Arsene Wenger ayaa lagu wadaa inuu bixiyo beesada 27 milyan oo bound ee lagu bur burin karo qandaraaska xiddiga garabka kaga ciyaara Boca Juniors ee Cristian Pavon si uu Premier League u keeno 21-jirka reer Argentina. (TyC Sports)
Macallinka Real Madrid Zidane ayaa sheegay inuusan dooneyn saxiixyo cusub uu sameeyo suuqan Jiilaalka iyadoo ay jirto inay kooxdiisu 16-dhibcood La Liga ka dambeyso Barcelona. (Reuters)
Weeraryahanka Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa ka tagi kara Old Trafford inta uusan dhammaan xilli ciyaareedkan. Joog dheeraha reer Sewden ayaa heshiiskiisu dhici doonaa xagaaga. (Yahoo Sport)
Everton ayaa kula dagaalameysa Southampton inay 20-milyan kala soo saxiixato Arsenal Theo Walcott, 28-jir. (Mail)
Liverpool ama Arsenal ayaa bixin doonaa ugu yaraan 90 milyan oo bound si ay ula soo saxiixdaan weeraryahanka Monaco ee Thomas Lemar 22-jir. (Mirror)
Laakiin sida uu sheegayo saxafiga Julien Laurens, in wiilka reer France laga yaabo inuu dib u dhigo u soo dhaqaaqistiisa Premier League sababo la xiriira koobka adduunka ee sanadka la ciyaarayo. (5 live’s Euro Leagues podcast)
Xiddiga reer Brazil ee Lucas Moura, 25-jir ayaa ogolaaday inuu ku soo biiro Manchester kana soo tago PSG inkastoo aysan labada kooxood weli lacagaha ku heshiin. (Gazetta dello Sport)
Arsenal ayaa u sameynaysa dalab heshiis kordhin oo rasmi ah xiddigeeda qadka dhexe ee reer England Jack Wilshere. 26-jirka ayaa la filayaa inuu wada hadalo la furo Gunners usbuuca soo socda waxaana la arkaa inuu hoos u dhigo mushaarkiisa si uu kooxda u sii joogo . (Mirror)
Borussia Monchengladbach ayaa weli xiiseynaysa inay la soo saxiixato daafaca Westh Ham Reece Oxford. 19-jirka ayaa afar kulan ka soo muqday intii uu xilli ciyaareedkan amaahda ugu joogay Gladbach, laakiin waxaa dib loogaga yeeray London Stadium bishii December. (Borussia Monchengladbach)
West Ham ayaana daafaca reer England ka iibin karta kooxda ka dhisan Bundesliga haddii ay sare u qaadaan dalabkooda 15-ka milyan. (Telegraph)
Kooxda reer Spain ee Sevilla ayaa xiiseynaysa inay amaah ku qaadato weeraryahanka Chelsea Michy Batshuayi, 24-jir. (ESPN)
Laakiin macallinka Blues Antonio Conte ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay wiilka reer Belgium kaa oo labo kulan oo qura lagu soo bilaabay Premier League kal ciyaareedkan. (Sky Sports)
Kooxda reer Turki Istanbul Basaksehir ayaa wada hadalo kula jirta Barcelona si ay ugala soo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee reer Turki Arda Turan, 30-jir. (IBFK)
Chelsea ayaa ogolaatay inay bixiso lacagta wakiilka ee 7 milyan ee heshiiska 15-ka milyan ay Everton uga soo saxiixatay Ross Barkley usbuucii tagay. (Times)
SHEEKO WAALAN: Sharad dhex maray daaficii Arsenal ka ciribtiray FA Cup-ka isaga iyo xaaskiisa, Wuxuu ku guulaystay EEY kaas oo uu u bixiyay Gunner
Arsenal oo diyaar u ah inay heshiis cusub ka saxiixdo Jack Wilshere